Mitemo yeruhambo yaNewton - Wikipedia
Mitemo yeruhambo yaNewton
(Redirected from Fosi inodhaya)
Muchidzidzo fundoyetsimba, Mitemo yeruhambo yaNewton inotsanangura hukama huripo pakati pefosi dziri kubata mutumbi nekuhamba (motion) kwemutumbi kunokonzerwa nefosi idzi. Kwemazana emakore hukama uhwu hwakataurwa nenzira dzakasiyana-siyana; Isaac Newton akazonyora mitemo yeruhambo yaNewton inotaura sezvizvi:
Mutemo wekutanga: Pachinge pasina fosi rokunze rinotsimbira, mitumbi yose inoramba iri pakuzorora, kana pakuhamba kusingachinje kunotevedza gwara rakatwasuka. Izvi zvinoreva kuti mutumbi wakazorora unoramba wakazorora kusvika watekenyewa nefosi rokunze risina rimwe fosi rinorigadadza. Zvakare mutumbi uri kuhamba unoramba uri kuhamba nespidhi imwechete uye rudzivo rusingachinje kusvika apo unotekenyewa nefosi rokunze risina rimwe fosi rinorigadadza. Uyu mutemo unotaura pamusoro pechinepfu.
Mitemo wechipiri: Apo mutumbi unohamba, rufangu rwawo a rwunotevedza rudzivo rwakati sambamba nefosi riri kutekenya; rufangu nefosi zvine muzasedimbu wekuteverana uye rufangu nehuremu zvine muzasedimbu wakasunama. Izvi zvinoreva kuti rufangu rwunokwira panokwira fosi uye rufangu rwunodzika panokwira huremu. Mutemo wechipiri uyu unonyorwa netsazaniso inotevera F = m.a
Mutemo wechitatu: Pane fosi yedzitsinyira yose pane imwe fosi inotsiva ine rudzivo rwakapesana kana kupikisana nefosi yedzitsinyira. Izvi zvinoreva kuti kana mitumbi miviri ichiita mutsimba wefosi, fosi yedzitsinyira nefosi inotsiva dzine huhombe hwakaenzana asi fosi idzi dzinongedza mativi akapesana.
Kurerutsa Mutauro [chinja]
Fosi yedzitsinyira ndiyo inonzi acting force kuEnglish kureva racho fosi ratanga kusunda kana kuzvuva. Shoko rokuti kudzitsinyira rinoreva kusadharara pakusunda kana kuzvuva - exerting a force to push or pull,
Fosi inotsiva ndiyo inonzi reactive force kuEnglish kureva fosi rinopikisana nefosi ratanga kusunda kana kuzvuva.
Retrieved from "http://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitemo_yeruhambo_yaNewton&oldid=33080"	Category: Fundoyetsimba	Navigation menu
This page was last modified on 11 Kurume 2013, at 11:00.